Hafatra Hoan’ilay Bilaogera Ethiopiana: Mahlet Fantahun, Tsy Irery Ianao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2015 1:17 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, русский, Deutsch, Română , Español, Français, čeština , bahasa Indonesia, English
Talohan'ny nisamborana azy, manam-pahaizana momba ny tahirin-kevitra nomerika tao amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana ao Ethiopia i Mahlet Fantahun, bilaogera Ethiopiana. Anisany ao anatin'ny vondrona famahanam-bilaogy iombonana antsoina hoe Zone9, i Mahlet. Nalaina avy amin'ny fonjan'ny fanjakana Ethiopiana ao Addis Abeba antsoina hoe Kality, izay manana faritra valo ny anaran'ny vondrona. Nomen'ireo bilaogera anarana ny hoe Zone9 (Faritra faha-9) ny tetikasan'izy ireo, amin'ny hevitra hoe “fonja onenan'ny Ethiopianina rehetra.”
Firaisankina no teny miverimberina foana ao amin'ny #mediafreedom2015 izay ain-dehiben'ny fahaleovantena maharitry ny media. Manao ahoana izany raha amin'ny fampiharana?